Caller ID ကိုအခမဲ့ Download | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » ခေါ်ရန် & ဆက်သွယ်ရန် Apps ကပ » Caller ID ကို - ဖုန်းနံပါတ်တည်နေရာ & ခေါ်ရန် blocker
Caller ID ကို - ဖုန်းနံပါတ်တည်နေရာ & ခေါ်ရန် blocker APK ကို
Caller ID ကိုမသိသောအဝင်ခေါ်ဆိုမှုဖော်ထုတ်နှင့်ပိတ်ဆို့ခြင်းများအတွက်အကောင်းဆုံး App ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာဖုန်းနံပါတ် tracker, မိုဘိုင်းနံပါတ်တည်နေရာနဲ့ခေါ်ဆိုခ blocker တူသောအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ Caller ID ကိုသင်ဖုန်းခေါ်လက်ခံရရှိတဲ့အခါသင်စစ်မှန်တဲ့ခေါ်ဆိုသူ၏အိုင်ဒီဖော်ထုတ်ပြသကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ ထို့ပြင်သင်တို့သည်လည်းဖုန်းနံပါတ်တည်နေရာခြေရာခံဖို့ဖုန်းနံပါတ် search function များအားကိုသုံးနိုင်သည်။ အကောင်းဆုံးကိုစစ်မှန်တဲ့ Caller ID ကို, ခေါ်ရန် blocker သုံးပြီးသင်ခေါ်ဆိုသူသိပါတယ်, မိုဘိုင်းနံပါတ် locator.Caller ID ကို 1 သန်း downloads, နှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအသိုင်းအဝိုင်းထံမှဘီလီယံခန့် 10 ကျော်နံပါတ်များကိုဒေတာထက်ပိုရှိပါတယ်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့ဆက်သွယ်ရေးလုံခြုံပြီးစမတ်စေရန်လိုအပ်ပါတယ်တစ်ခုတည်းသော App ဖြစ်ပါတယ်။
★ Caller ID ကို
အများဆုံးအဆင့်မြင့် Caller ID ကို app ကို အသုံးပြု. သင်ခေါ်ဆိုသူထွက်ရှာပါ, တကဖုန်းနံပါတ် tracker များကဲ့သို့ဖုန်းနံပါတ်တည်နေရာကိုခြေရာခံခြင်း ... စစ်မှန်တဲ့ခေါ်ဆိုသူ၏အမည်, တည်နေရာ, အိုင်ကွန်, စသည်တို့နှင့်အတူမည်သည့်အမည်မသိဖုန်းခေါ်ဆိုမှုခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ သငျသညျခကျြခငျြးတောင်းဆိုအဖြစ်ခေါ်ဆိုခဖြေဆိုရန်ဆုံးဖြတ်သောသူသည်ကိုသိနိုငျသညျ။
ဒါဟာသင်ရုံခေါ်ဆိုမှုအမည်ပျက်စာရင်းမှနံပါတ်ထည့်သွင်းခြင်းနှင့်ငါတို့သည်အရာကြွင်းလေသမျှလုပ်ပေးလိမ့်မယ်စတာတွေ telemarketers, လိမ်လည်သူများကို, ဥပဒေကြမ်းစုဆောင်း, robocalls ကဲ့သို့ရှောင်ရှားချင်သောနံပါတ်များနှင့်စာသားများပိတ်ဆို့ကူညီပေးသည်။
★မတ်ခေါ်ရန် Log in ဝင်ရန်
အသေးစိတ်အတွက်မကြာသေးမီခေါ်ဆိုမှုမှတ်တမ်းထဲမှာစစ်မှန်တဲ့ခေါ်ဆိုသူ၏အမည်နှင့်ဖုန်းနံပါတ်ကိုတည်နေရာပြသထားတယ်။ အဆိုပါလွဲချော်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု, ပြီးစီးခဲ့အဝင်အထွက်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုမရှိအဖြေကိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအပါအဝငျ။ တော့ဘူးအဘယ်သူမျှမမသိသောနံပါတ်များကို။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့မတ်ရှာဖွေရေးစနစ်ဖြင့်မည်သည့်ဖုန်းနံပါတ်အဘို့ရှာပါ။ အလွယ်တကူစစ်မှန်တဲ့ခေါ်ဆိုမှု ID ကြည့်ဖို့! ဒါဟာမိုဘိုင်းနံပါတ် Locator app ကိုနဲ့တူအလုပ်လုပ်ပါတယ်။
Caller ID ကိုသင့်အကြိုက်ဆုံးအဆက်အသွယ်မခေါ်ကူညီပေးသည်တစ်ခုအသုံးပြုရလွယ်ကူ T9 dialer ရှိပါတယ်။ တိုက်ရိုက် app ထဲမှာဖုန်းခေါ်ဆိုမှုပြုလုပ်ပါ။
★မတ် SMS ကို app ကို
တိုင်းမသိသော SMS ကိုအလိုအလျှောက်ခွဲခြားသတ်မှတ်။ SMS ကို blocker နှင့်ပိတ်ပင်တားဆီးမှုဖုန်းခေါ်ဆိုမှုမှဖြည့်စွက်နေတဆင့်စာသားမက်ဆေ့ပိတ်ဆို့။
အင်တာနက် access ကိုမပါဘဲမသိရဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများနှင့်မက်ဆေ့ခ်ျများခွဲခြားသတ်မှတ်။ အော့ဖ်လိုင်းဒေတာဘေ့စစသည်တို့ကိုအီဂျစ်, ဘရာဇီး, အမေရိကန်, အိန္ဒိယ & ဆော်ဒီအာရေဗျ ... အတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။ အင်တာနက်မလိုဘဲအမည်နှင့်လိပ်စာဓာတ်ပုံတစ်ပုံနှင့်အတူစစ်မှန်သောခေါ်ဆိုသူ၏အိုင်ဒီနှင့်တည်နေရာဖော်ပြရန်။
- အစွမ်းထက်နံပါတ်များကိုဒေတာစစ်မှန်တဲ့ခေါ်ဆိုသူ၏အိုင်ဒီနှင့်အတူအမည်မသိနံပါတ်များကိုသိရှိနိုင်ဖို့ Caller ID ကိုထောကျပံ့ဖို့။
- စမတ်ဖုန်းနံပါတ်ရှာဖွေရေးစနစ်ကဖုန်းနံပါတ်တစ်ခု tracker တူသောမည်သည့်ဖုန်းနံပါတ်တည်နေရာကိုခြေရာခံရန်သင့်အားကူညီပေးသည်။
- ခေါ်ဆိုခအမည်ပျက်စာရင်းများတွင်ထည့်သွင်းအော်တိုပိတ်ပင်တားဆီးမှုမလိုချင်တဲ့ဖုန်းခေါ်ဖို့အကောင်းဆုံးခေါ်ဆိုခ blocker ။
- သင့်ခေါ်ဆိုခ loge စကင်ဖတ်ခြင်းနှင့်ခွဲခြားသတ်မှတ်။ ထူးဆန်းတဲ့ခေါ်ဆိုမှုများအကြောင်းအဆက်အသွယ်များနှင့် display ကိုအသေးစိတျကိုရယူပါ။
- ကသာ 4MB ငါတို့ကိုရန်လွယ်ကူ။
Caller ID ကို Multi-lingual ဖြစ်တယ်, သင်သွားလေရာရာ၌ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးဖုန်းနံပါတ်ဒေတာဘေ့စနှင့်အတူ, သင်ကသုံးနိုငျ!
* Caller ID ကို app ကိုပြုလုပ်အများပြည်သူသို့မဟုတ်ရှာဖွေစေရန်သင့်ဖုန်းစာအုပ် upload လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
- သင့်ပုံမှန် SMS app အဖြစ် Caller ID ကိုသတ်မှတ်မည်။
- အဝင်ခေါ်ဆိုမှုအပေါ်မှားပုံစံချပေး Fixed ။
- နယူးအော့ဖ်လိုင်းဒေတာဘေ့စကဆက်ပြောသည်။ ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်မှုမပါဘဲရှာရန်အရေအတွက်ကို။
Caller ID ကို - ဖုန်းနံပါတ်တည်နေရာ & ခေါ်ရန် blocker
3.93 ကို MB
သင်တို့သည်လည်းများတွင်စိတ်ဝင်စားစေခြင်းငှါ အတုခေါ်ဆိုသူ၏အိုင်ဒီ app ကို